Super Arc Chiedza, kunyorera kwesvondo rino paApp Store | IPhone nhau
Super Arc Chiedza, kudzivirira denderedzwa redu muapp yevhiki
Vhiki nyowani, chishandiso chitsva chemahara chinopihwa naApple muchitoro chayo chekushandisa. Ino nguva isu tine mumwe mutambo, iyo mhando yekushandisa iyo inonyanya kupihwa mukusimudzira uku. Mutambo unodaidzwa Super Arc Chiedza uye handikwanise kutaura kuti ndine shungu nazvo. Asi usakanganise, handisi kuzvitaura nekuti zvinoita kunge zvakaipa kwandiri, asi nekuti ndiwo mhando yemutambo watinofanira kuisa pfungwa kana kuti isu tichafa mukati memasekonzi ekutamba.
Super Arc Chiedza chinondiyeuchidza nezvemutambo wekare kwazvo watakatoputika miseve mizhinji kana ivo vachizopedzisira vaparadza nyika yedu. Isu isu tiri katatu iyo inofamba ichitenderera denderedzwa uye isu tinofanirwa kupfura mamwe mativi matatu kuswedera ku "arch" yedu.
Super Arc Chiedza, mumwe mutambo wenetsinga dzesimbi
Hunhu hwedu, kana kuti, kona inofamba ichitenderedza denderedzwa repakati nguva dzose. Kana tikabata chidzitiro, iyo katatu inoshandura mafambiro ekutenderera. Kana tikatarisa kuti tinofanirwa kupfura vavengi vedu uye kuti tinogara tichifamba, isu tichafanirwa kuve nechinangwa, rombo rakanaka kana hunyanzvi hwakawanda, chimwe chinhu chandinofanira kureurura chandisina panguva yandakaedza izvi mutambo.
Vavengi vedu ndiwo machena matatu, asi anozotsvuka kana vasvika padanho rine njodzi. Naizvo zvombo zvichaonekwa Panguva yatinozofanira kupfura kuti tikwanise kuvabata, saka zvakakodzera kubata nguva shoma kuti tikwanise kunakidzwa nemutambo mumamiriro.
Sezvatinogara tichitaura, zvakanakisa zvatingaite kurodha pasi Super Arc Mwenje izvozvi zvazviri inowanikwa mahara kusarudza zvekuita nayo gare gare. Ini pachangu, panguva ino handichataura kuti ndiri kuenda kuisiya ichiiswa pane yangu iPhone, pamwe nekuti izhizha uye kupisa kunondiita kuti ndide imwe mhando yemutambo umo ini ndisingatye kudaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Arc Chiedza, kudzivirira denderedzwa redu muapp yevhiki
Izvi zvaive zvisina kusununguka kare?
Ndatenda zvikuru Pablo, ini ndanga ndisingamuzive.
Apple kuvhura yayo yekutanga Apple Store muBrooklyn, New York